यि कस्ता घरबेटी ? जसले महिलासँग भाडाको साटो सेक्स माग्छन्… — Imandarmedia.com
आज : २०७५ मंसिर २५ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
लण्डनमा कोठा भाडामा लगाउने घरबेटीहरुले भाडाको सट्टा सेक्सको माग गर्दै ‘रेन्ट फर सेक्स’ भन्ने अभियान चलाउँदै विज्ञापन छाप्न थालेपछि त्यसको सत्यताबारे बुझ्न गएकी बीबीसी थ्री डकुमेन्ट्रीकी पत्रकार एली फ्लिनको अनुसन्धानमा आधारित ।
‘हो, खाना पकाई दिए बापत, सफाई गरिदिए बापत र बस्नलाई छानो दिए बापत मसँग सेक्स गर्न पाउने प्रस्ताव राखिँदै थियो । लण्डनको त्यो शुक्रबारको साँझ मेरो अघिल्तिर २५ वर्षको एउटा युवक बसेको थियो ।’
उसले आफ्नो सुत्ने कोठा मसँग साझा गर्न तयार रहेको भन्यो, त्यो पनि बिना कुनै भाडाको… तर उसको एउटा सर्त थियो– सेक्स गर्न पाउनुपर्छ । मैले त्यहाँ आश्रय पाउनुका निम्ति उसँग नियमित सेक्स गर्नु पर्ने हुन्थ्यो ।
जुन युवकका अघिल्तिर म बसेकी थिएँ उसका लागि म एउटी नर्सिङ पढ्दै गरेकी २४ वर्षीय विद्यार्थी थिए, जोसँग लण्डनमा बस्नका लागि कुनै घर थिएन । लण्डनको जुन घरमा उसले यो सबै प्रस्ताव राखिरहेको थियो उसँगै त्यहाँ अरु पनि बस्ने गर्थे ।
तर पनि उसले भन्यो– ‘अरु भए पनि केही फरक पर्दैन मात्र तिमीले मेरी ‘गर्लफ्रेन्ड’ हो भने पुग्छ ।’ जब म अलिक आत्तिएझैँ गरे त्यसपछि उसले मलाई फकाउँदै आफ्नो कुरामा सहमत गराउन खोजिरहेको थियो ।
उसले के पनि भन्यो भने– ‘हेर यसरी अनलाईनमा कोठा अफर गर्नेहरुमध्ये म निकै राम्रो विकल्पमा पर्छु ।’ उसले थप भन्यो– ‘मेरो कुरामा विश्वास गर निकै मजा आउँछ ।’
यो शहरमा उ कुनै एक्लो मानिस थिएन जसले मलाई घरमा ‘रेन्ट फर सेक्स’ (बस्न दिए बापत सेक्सको प्रस्ताव)को प्रस्ताव राख्दै थियो । यस अघि नै मैले लोकप्रिय ‘क्लासिफाईड एडभर्टिजमेन्ट साइट’ हेरी सकेकी थिए । जहाँ दर्जनौँ यस्ता विज्ञापनहरु थिए जहाँ ‘एडल्ट एरेजमेन्ट’को सट्टा घर र कोठा दिने प्रस्ताव गरिरहेका थिए ।
यस्ता विज्ञापनहरु पूरै ब्रिटेनमा नै फैलिएको छ । ब्राईटनदेखि लिएर एडिनबारासम्म । यो काम त ठूलादेखि साना सबै सहरहरुमा चलि नै रहेको थियो । यस्ता खाले प्रस्ताव सहित गरिएका विज्ञानबारे मैले हेरी नै रहेकी थिएँ कि एउटा घरबेटीले मलाई मेरो शरीर र छातीको आकार सोध्यो ।
अर्को एउटा घरबेटीले भन्यो– ‘तपाईं जतिबेलासम्म यो ‘एडल्ट एरेन्जमेन्ट’का लागि तयार हुनुहुन्न हामी यसमै कुरा गरिरहन सक्छौँ ।’ अनि मैले ती घरबेटीहरुसँग समय मिलाएर भेट्ने निधो गरेँ । म के कुरामा अच्चम्मित भएँ भने ती सबै घरबेटीहरु फरक फरक उमेर समूहका थिए ।
एउटा घरबेटी २४ वर्षको केटो थियो भने अर्कोले मलाई आफ्नी छोरीको कोठा साझा गर्न दिने बारे प्रस्ताव गरिरहेको थियो । अर्कोले भने पछाडीको बगैचामा रहेको कोठा दिने तर त्यस बापत आफूले नियमित सेक्स गर्न पाउनुपर्ने बताइरहेको थियो । तपाईंसँग भाडा पनि लिँदैनौँ भन्ने उनीहरुको स्पष्ट भनाई थियो ।
मैले जति पनि घरबेटीहरुलाई भेटेँ ती धेरै जसो एक्लै बस्नेहरु थिए । मैले ती घरबेटीहरुका अघिल्तिर आफूलाई कसरी पेस गरेकी थिए भने, मसँग लण्डनमा बस्नका लागि कुनै घर छैन र निकै लाचारीपूर्ण अवस्थामा आफ्नो जीवन व्यतित गर्दैछु ।
उनीहरुले यस्तो परिस्थिती बुझेर निकै बेशर्मीकासाथ मलाई बस्नलाई ठाउँ दिए बापत आफूसँग सुत्नु पर्ने कुरा गरिरहेका थिए । उनीहरुलाई कुनै असहजपना थिएन कि उनीहरुले के भनि रहेका छन् र यो गलत हो ।
यस क्षेत्रमा काम गर्दै गरेकी एलेन मोरानका अनुसार यो सबै काम गैरकानूनी हो तर पनि कानून लागू गराउने संस्थाहरुले यो सबै जान्दा जान्दै पनि हुन दिइरहेका छन् । उनको संगठनले ‘रेन्ट फर सेक्स’ भन्ने अभियानलाई गैरकानूनी करार गर्नका लागि काम गरिरहेको छ ।
उनका अनुसार सरकारले ‘रेन्ट फर सेक्स’लाई सरकारले नै गैरकानूनी घोषित गर्नुपर्ने हो । हामीले यसलाई फेर्नका लागि आधारभूत तहबाटै केही परिवर्तन गर्नु पर्ने कुरा बताइन् ।
एली फ्लिन/बीबीसी थ्री रातोपाटीले अनुवादन गरेको सामाग्री ।
२०७४ फागुन १८ गते प्रकाशित
चिनियाँ पक्षले बुझायो रेलमार्गको अध्ययन प्रतिवेदन
महासमिति बैठकमा पेस हुने कांग्रेसको आर्थिक प्रतिवेदन पारित
अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा के भयो ?
जुम्ला जान १ सय ५० विशेषज्ञ चिकित्सकको निवेदन
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यसो भने
सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा मनाङ
ओली सरकारलाई चुनौती दिँदै नेकपाको जनसरकार, जनताको हितमा गर्‍याे यस्तो उदाहरणीय कार्य
सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्कंदै गएपछि राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने
ओली-प्रचण्डबीच खटपट सुरु, कर्मचारीको बिषयलाई लिएर सार्वजनिक रुपमै दोहोरी
निर्मला हत्या काण्डमा संग्लन भएको आशंकामा काठमाडौंबाट एक युवक पक्राउ, को हुन उनी ?
अन्जु पन्तका १० विवाद, पैसाका लागि हुरुक्क, केटा भनेपछि जुरुक्क
प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर गल्ती गरेको खुलासा, कसरी भयो यस्तो ?
सरकारलाई दिएको समर्थन चार दिनपछि फिर्ता लिँदै राजपा
यौन आरोप लागेका मुख्य मन्त्री शेरधन राईले विराटनगर पुगेर कर्मचारीलाई यसो भने
निर्मलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको आशंका, महेन्द्रनगरबाट तीन जना पक्राउ
बर्खास्त गरिएका मन्त्री सोडारीले भने- ‘मलाई हटाउनुको कारण थाहा छैन’